Najanona tamin’ny mpanampy tao an-tranony, teny amin’ny faritra Andravoahangy ilay zaza. Nampangotraka rano ilay nanankinana ilay ankizy kely. Sendra voasinton’ilay zaza ny vilany feno rano mangotraka ka may tamin’izay ny tanan’ilay zaza nihazo ny sandrikeliny. Niantso sy nampilaza ireo ray aman-dreniny avy hatrany ilay mpanampy. Noho ny fifanosehana sy ny hamaroan’ny vahoaka dia taraiky ihany vao tonga ireo ray aman-dreniny. Vao nigadona tao an-trano izy ireo dia noesorina ilay akanjon’ilay zaza.
Niendaka avy hatrany ireo hoditra mbola manify sy marefo tamin’ny tanany izay nanaraka ny akanjony. Nahita iny fiendahana iny ilay mpanampy dia nikiakiaka ka taitra tamin’ilay feo mafy sy ny ratra nahazo azy ilay zazakely ka nijanona tampoka ny fony. Nentina tany amin’ny toeram-pitsaboana akaiky fa tsy avotra intsony ilay zazavavikely. Marihina fa tsy ilay main’ny rano mangotraka no nahatonga ilay zaza namoy ny ainy fa noho ilay fahatairana nahita ilay hoditra niendaka. Heverina mantsy fa efa nisy fotoana ela ihany nahamay ilay ankizy kely mandra-pahatonga ireo ray aman-dreniny hamonjy ny menaky ny ainy.
Vao nahita ilay zaza namoy ny ainy ilay mpanampy dia nitsoaka. Nifampitadiavana io mpanamy io ary ny alahady maraina vao hita fa lasa nitolo-tena tany amin’ny mpitandro filaminana izy, raha ny filazan’ny manodidina. Mila andraisana fepetra hentitra ny fametrahana ny karazana rano mafana toy itony fa efa maro no niharan-doza vokatry ny tsy fahalalan’ny zaza ny tranga toy izao.
Zaza iray main’ny rano mangotraka no maty tety Andravoahangy ny sabotsy tolakandro teo (Sary fanehoana)
Zaza iray matin’ny fahatairana sy ny rano mangotraka
Maty vokatry ny fahatairana ny zazavavikely sahabo iray taona mahery. Nandeha nijery fitsenana ny ekipam-pirenena Barea ireo ray aman-dreniny, ny sabotsy tolakandro teo. Najanona tamin’ny mpanampy tao an-tranony, teny amin’ny faritra Andravoahangy ilay zaza. Nampangotraka rano ilay nanankinana ilay ankizy kely. Sendra voasinton’ilay zaza ny vilany feno rano mangotraka ka may tamin’izay ny tanan’ilay zaza nihazo ny sandrikeliny. Niantso sy nampilaza ireo ray aman-dreniny avy hatrany ilay mpanampy. Noho ny fifanosehana sy ny hamaroan’ny vahoaka dia taraiky ihany vao tonga ireo ray aman-dreniny. Vao nigadona tao an-trano izy ireo dia noesorina ilay akanjon’ilay zaza.